ရှက်တော့ရှက်ပါသည် သို့ သော် အိမ်တိုင်ရာရောက် အလိမ်ခံလိုက်ရသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရှက်တော့ရှက်ပါသည် သို့ သော် အိမ်တိုင်ရာရောက် အလိမ်ခံလိုက်ရသည်
ရှက်တော့ရှက်ပါသည် သို့ သော် အိမ်တိုင်ရာရောက် အလိမ်ခံလိုက်ရသည်
Posted by moonpoem on Sep 19, 2011 in Myanma News, News | 27 comments
တရုတ်လူလိမ်၏ လိမ်ညာခြင်း လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
ပြီးခဲ့သော သောကြာနေ့ ကဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ အိမ်အောက်ထပ်တွင် ဦးလေးက စပီကာ ပစ္စည်း ပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်။
ထို နေ့ က တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက် အိမ်ထဲကို ၀င်လာသည်။ သူ က တက္ကစီပေါ်က ဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ဆိုတော့ အသားဖြူသည် ကြည့်ရသည့်ပုံစံကလည်း တကယ့်ကို သားသားနားနားပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ နောက်
သူ က တရုတ်လိုတွေ ပြောပါသည်။ ဘယ်သူကမှနားမလည်တော့ အိမ်နားတွင် နေထိုင်သော တရုတ်စကား
တတ်သည့် အသိကို သွားခေါ်ပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းရသည်။
ဘာသာပြန်ခိုင်းသောအခါ ထိုတရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာသည်မှာ ၂ရက်ပဲ ရှိသေးပြီး ယခု တရုတ်တန်းမှ အပြန်တွင်
ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရသည်။ သုံးစရာ ပိုက်ဆံမရှိတော့သဖြင့် ပိုက်ဆံလည်း အလကားမတောင်းချင်ပါ။ ထို့ ကြောင့် ပါလာသည့်
သူ၏ လက်တော့ပ်ကို ရောင်းပါရစေ ကျေးဇူးပြုပြီး ၀ယ်ပေးပါ။ ယခုမြန်မာ ငွေကြေးနဲ့ ဆိုလျှင် ၄သိန်းလောက်တန်သော်လည်း
သူ့ ကို ၂သိန်းပေးရင် ရပါပြီ ဟုပြောသည်။ အိမ်က ဦးလေးက သူ့ သားက လက်တော့ပ်ပူဆာနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်
၀ယ်မည် ဟု ကြံနေချိန်တွင် ထိုတရုတ်ရောက်လာသည့်အတွက် သူ့ အတွက်တော့ အတော်ပဲ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး
သူတို့ အချင်းချင်း တစ်သိန်း၇သောင်း နဲ့ ဈေးတည့်သွားကြသည်။ ကျွန်မကတော့ ဦးလေးကို ကြည့်ကောင်းအောင်
တားပါသေးသည်။ သို့ သော် သူကလိုချင်နေသည့်အတွက် ဘာပြောပြောနားမ၀င်တော့။ ကျွန်မကတော့ ဒီလူကို မသင်္ကာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း မတတ်နိုင်ပါ လက်လျှော့လိုက်ရသည်။ တနင်္ဂနွေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က DOCOMOမှာ ကွန်ပျူတာ
သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး သွားတော့ ကျွန်မ အဖော်လိုက်သွားသည်။
ဟိုနေ့ က ၀ယ်လာသည့် အတိုင်း ချွတ်စွပ်တူသော လက်တော့ပ်ကို တွေ့ ရသည် ။ ဈေးမေးကြည့်သောအခါ ၈၀၀၀၀(ရှစ်သောင်း)
ပါတဲ့။ ဦးလေးကို ပြန်မပြောပြတော့ပါ။ သူ့ သား လိုချင်တာ ပေးလိုက်ရသည့်အတွက် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အပျော်တွေ
မပျက်စေချင်လို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ တရုတ်လူလိမ်၏ လိမ်ညာခြင်း တွေ တခြားလူတွေ ထပ်ပြီး မခံရစေရန်
၀လို့ ဆီလုပ်တွေ လိမ်တယ်လို့ မင်းပြောချင်တာလား
မင်းကိုလော် ၀လက်တို့လိုက်မယ်လော် :D
လူမျိုးခြားဆို သိပ်ယုံတာ (သူတို့က မလိမ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ကြတာကိုး)
နည်းဗျူဟာ အသစ်တွေပါလား… ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေပါလား..
နားလည်တဲ့ လူတွေကို မေးကြည့်ပါအုန်းလား.. အထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ပိုများ ကောင်းနေလေမလားလို့.. ကောင်းနေရင် တန်ကြေး အဲလောက် မကွာလောက်ဘူး။
ရသေ့ စိတ်ဖြေ.. တွေးလို့ ရတာပေါ့..
အခုတော့ ဘာပြောမလဲ ။ ”
လက်ထဲ ရောက်နေပြီ ဆိုမှတော့
ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ တန်အောင် သုံးပါလို့ ပဲ
ပြောရတော့မှာပေါ့ နော် …
ဒိုကိုမို မှာ ၈ သောင်းတန် လပ်တော့ ရှိသလား..ဗျ..
၈ ရက်လောက်တော့ ခံမယ်ထင်ပါတယ်..
ရှက်မနေပါနဲ့ ကွယ် ……အဲဒိလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်ဒ ၀န်ခံလိုက်တော့ ရင်ထဲ ပေါ့သွားတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်
နောက်ဒီထက်ဆိုးမယ် .. တရုတ်မှ မဟုတ်ပါဘူး အဖြူကောင်လဲ လိမ်မှာပဲ အမဲကောင်လဲ လိမ်မှာပဲ ကြီးကြီးလိမ်တာနဲ့ သေးသေးလိမ်တာပဲကွာမယ် .ကျွန်တော်တို့ နိင်ငံသားတွေ မျက်စိပွင့် နားစွင့် ရှိကြပါ ..ဘာမှ မရရင် လူကိုလိမ်ယူမယ်… ဒီဒဏ်တွေကို မလေးနဲ့ ထိုင်းက ကောင်းကောင်း သိနေပြီ…နိုင်ငံခြားသားကို အထင်ကြီးတဲ့ စိတ်တွေ နဲနဲရှော့စေချင်မိတယ်……….
မှန်လိုက် လေဗျာ ။နိုင်ငံခြား သား မြင်တိုင်း မစ္စတာ မစ္စတာ ပါးစပ်ကကို မချချင် တဲ့သူ မျိုးတွေ အလကား နေအထင်ကြီးနေတာတွေ လျှော့သင့်ပါ ပြီ။
သတင်းစာထဲမှာလည်း တူရကီနှစ်ကောင် ရွှေဘိုမှာ ဆိုင်ထဲဝင် ၀ယ်ပြီး ဆိုင်ရှင်ထံက သိန်း၂၀ မ သွားတာ ပြန်မိလိုက်တယ်။
အော် တရုတ်ပြည်မကြီးမှာသုံးတဲ့ ပစ္စည်းမို့ ဈေးပေးလိုက်ရတယ် မှတ်ရတော့မယ့်ပုံပါလား။
Winner Computor ဆိုင် (မြို့ထဲကသွားရင် ရွှေတိဂုံဘုရားအကျော် ဦးဝိစာရလမ်းဓာက်ဆီဆိုင်လမ်းကြားမှာ )လက်တော့အသစ်မှ ၅သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ (သွားဝယ်ချိန်ဒေါ်လာဈေးကျလို့ ၇၅၀ခန့်)
ဒါပေမယ့် လမင်းကဗျာရယ် ဒိုကိုမိုကပစ္စည်းထက်
အခုတရုတ်လာေ၇ာင်းတဲ့ ပစ္စည်းက ပိုသန့်တယ်လို့
တွေးပြီး သုံးလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်မှာပါလေ
အင်း ဒီတရုတ်က လိမ်တာ ခုမှမဟုတ်တော့ပါဘူး အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ တရုတ်က ခုခေတ်ပေါ် လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကို လာလိမ်တာဖြစ်မှာပါ။ အရင်တုန်းက အိမ်ကိုလည်း ရောက်လာခဲ့ဖူးတယ်။ အဲချိန်တုန်းကတော့ သူက အထည်ချုပ်အကျီတွေနဲ့ လာပြီး ယုံအောင်ပြောပြီး ရောင်းတယ်လေ.. အိမ်က မ၀ယ်ပါဘူး။ ဒါက အကြံအဖန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြပြီး ငြင်းလိုက်တယ်။ ဒီအိမ်က မ၇တော့ နောက်တစ်အိမ်သွားမှာပေါ့။
လမင်းကဗျာရေဒါကလည်း ကူညီတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး လမင်း တွေး သလိုဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာ လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေကလည်းခက်တယ်ဗျ။ အချောင်ရမယ်ဆို ယက္ခမတောင် ထပ်ယူရင်ယူမယ့်လူစားမျိုး (အဖတ်တင်တာပေါ့လေ)။
လိမ်တဲ့လူကပဲ တော်တာလား ခံရတဲ့ လူကပဲ ညံ့တာလား မသိဘူးနော် … ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ … ကွန်ပျူတာ ဆိုင်က မဟုတ်ပဲ ၀ယ်မိတာကိုက အယုံလွယ်တာလေ … ။ အင်ထုရောင်းချင်တဲ့ လူကလည်း ဘယ်သူ့ကိုများ လိမ်လို့ ရမလဲ တွေးပြီးလိမ်နေတာ …. ။ အဲ့ဒီတရုတ်တကယ်တမ်း ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတယ်ဆိုလျှင်တောင် သူတို့ သံရုံးရှိနေတာပဲ … အဲ့ဒီမှာ အကူညီသွားတောင်းတောင် ရတယ် :D
လူလိမ်ဆိုတာ လူလယ်တွေကများပါတယ်။ လောဘကြီးသူတွေကို ရှာပြီးလိမ်တတ်ပါတယ်နော်..။
ပြောရရင်တော့ကျွန်မဦးလေး ညံ့လို့အယုံလွယ်လို့ လူလိမ်ရဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လိမ်ခြင်း ခံလိုက်ရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပထမအကြိမ်ဆိုတော့ လိမ်သူရဲ့ အမှားပဲလို့စိတ်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
Let me know brand ?
ီနိူင်ငံခြားအထင်ကြီးတတ်တဲ့ စိတ်…… အချောင်၇မယ်ဆို၇င်..ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ တဲ့ လောဘစိတ်ကြောင့် ဖြစ်၇တာပဲါဲမြန်မာပြည်ထဲမှာေ ၇မျောကမ်းတင်နိူင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်
အင်း.. ဒါမျိုးကို ကျုပ်ကတော့…
ရှစ်သောင်းတန်လပ်တော့ ရှိတာတောင် မသိဘူးဗျာ အဲဒီဆိုင်က ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းပြီး ဈေးလည်းသက်သာတာကတော့ ကြားဖူးပါတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျို့ လမင်းကဗျာ ရေ ကျုပ် ရဲ့ ဆရာကို လည်း မနေ့ က တရုပ်တစ်ယောက်က ဖေါ်ရိန်နာ ယောင်ဆောင်ပြီး ဟန်းဆက်ရောင်းတယ်။ ဆရာက လိမ်မှန်းသိလို့တော်သေးတယ်။ သူ့ အိုင်ဖုန်းကို လာရောင်းတာလေ။ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းပဲပေးတဲ့။ မှတ်တောင်ထားရဦးမယ် အိုင်ဖုန်းကို အဲ့ဈေးနဲ့ရမလား။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် laptop တစ်လုံး (အသစ်) ဆိုတာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ရှစ်သောင်းနဲ့ ၀ယ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ရေးတာပဲ မှားများနေလားမသိဘူး။ laptop အဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ DoDo KoKo, Yogi House တွေမှာတောင် ရှစ်သောင်းနဲ့ရတဲ့ laptop ဆိုတာ မမြင်ဖူးပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင်လဲ အဲ့ဒီ laptop ရဲ့ brand name နဲ့ processor speed, Ram တွေကို ပြောပေးပါလား
ခက်တာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက များသောအားဖြင့်
လိမ်တာကတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာပြီးလိမ်နေကြပါတယ်
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ မပြောင်းမချင်းပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်မှာ စက်ကန်းဟန်းရောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုင်မှာ အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကို
နစ်လလောက်ပဲကြာတယ် ဘတ်ထရီ လုံးဝသွင်းလို့မရတော့ဘူး ဆိုင်သွားပြင်တော့လည်း
အချောင်နိုက်ချင်တဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ ရှက်မိပါတယ် သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ
တစ်ခါတည်းပြောရဦးမယ် စက်ကန်းဟန်း ပစ္စည်းတွေ လုံးဝမသုံးပါနဲ့ အာမခံချက်လုံးဝမရှိဘူး
သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခါတည်း စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုက်မှ ၀ယ်သုံးပါ
စွယ်စုံသုံးလို့ရတဲ့တရုပ်ပစ္စည်း ဘယ်တော့မှမသုံးလေနဲ့ သုံးရင်သုံးတဲ့လူအပြစ်ပါ
Docomoမှာ လက်တော့ပ်ေ၇ာ တခြားပစ္စည်းတွေရော ရောင်းပါတယ် အသစ်လည်း ၇ှိသလို စက်ကန်းဟန်းလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်မကြည့်ခဲ့တာ စက်ကန်းဟန်းပါ။ ၈သောင်းတခါတည်းနဲ့ မတတ်နိုင်ရင် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေးပြီး မိတ္တူပေးရင်အရစ်ကျ ငွေသွင်းပြီး တောင်ဝယ်လို့ ရပါတယ်။